सनराइजका ग्राहकहरुलाई देशभरका ८० भन्दा बढी निजी अस्पतालहरुमा विशेष छुट
सनराइज बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्य बीमा योजना अन्र्तगत विशिष्ठ सेवा पुर्याउने हेतुले देशभरका ८० भन्दा बढी निजी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार बैंकका ग्राहकहरुले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा ५ प्रतिशत देखि २० प्रतिशत सम्म विशेष छुट पाउन सक्ने छन् । कोही पनि ग्राहक यस सेवाबाट वञ्चित् नहुन् भन्ने लक्ष्य बैंकको रहेको र जस्को प्राप्तिको लागि बैंकले अरु निजी अस्पतालहरुसँग समेत सम्झौताको क्रम जारी राखेको बैंकले जनाएको छ । तोकिएका अस्पतालहरुमा छुट पाउनका निम्ति ग्राहकहरुले बैंकको भिसाकार्ड (डेविट वा क्रेडिट कार्ड) देखाउनु पर्दछ । साथै ग्राहकको सहजताको लागि बैंकले १ वर्ष सम्मको लागि भिसाकार्ड निःशुल्क प्रदान गरेको छ ।
कोही पनि ग्राहक यस सेवाबाट वञ्चित् नहुन् भन्ने लक्ष्य बैंकको रहेको र जस्को प्राप्तिको लागि बैंकले अरु निजी अस्पतालहरुसँग समेत सम्झौताको क्रम जारी राखेको जनाएको छ ।
यसै क्रममा बैंक र मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालबीच स्वास्थ्य उपचारमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता पछि ग्राहकहरुले सुविधा पाउने अस्पतालको संख्या ८४ पुगेको छ । अस्पतालहरुको नाम तथा छुटको विस्तृत विवरण बैंकको वेवसाईट wwww.sunrisebank.com.np मार्फत प्राप्त गर्न सकिने छ ।
१६ बाणीज्य बैंकको नाफा करिब ३१ अर्ब ७४ करोड
३१ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा १६…
आजपनि ८ सयले बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति छ त आज प्रतितोला ?
३० साउन, काठमाण्डौं । लगातार बढेर आइतबारदेखि निरन्तर घटेको सुनको…
डलरको भाउ स्थिर, कति छ त आज अन्य मुद्राको भाउ ? हेर्नुहोस् विवरण
एकैदिनमा २४ सयले बढ्यो सुनको भाउ, आज कति छ त प्रतितोला ?